Kooxda Bayern Munich oo 75 milyan oo gini ku dooneysa Weeraryahan ka tirsan Liverpol… (Ma Salah, Mane mise Firminho?) – Gool FM
Kooxda Bayern Munich oo 75 milyan oo gini ku dooneysa Weeraryahan ka tirsan Liverpol… (Ma Salah, Mane mise Firminho?)
(Munich) 10 Feb 2020. Bayern Munich ayaa isku diyaarinaysa dalab 75 milyan oo gini ah inay kula soo wareegayaan weeraryahanka Liverpool ee Roberto Firmino, sida ay sheegayaan warar soo baxaya.
Ciyaaryahanka caalamiga ah ee qaranka Brazil ayaa marba marka ka dambeysa hormar ka sameeynayay garoonka Anfield tan iyo sidii uu kaga mid noqday sanadii 2015-kii.
Waxa uu dhaliyay 78 gool, 228 kulan oo uu Reds ka soo muuqday, 28 sano jirkaan ayaana Liverpool kula guuleystay Champions League xilli ciyaareedkii tagay, wuxuuna u muuqda mid sanadkan kula guuleysanaya horyaalka English Premier League.
Jurgen Klopp waxa uu Firmino ku qiimeeyaa inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu muhiimsan qolka labiska, laakiin waxa uu wajahayaa dagaal uu ku sii haynayo xiddiga reer Brazil, iyadoo Kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich ay rajeynayso inay xaqiijiso saxiixiisa.
Haddaba Wargeyska “The Sun” ayaa ku waramaya in Bayer Munich ay doonayso in ay soo af duubato Weeraryahanka Liverpool ee Roberto Firmino, iyadoo miiska saareysa adduun dhan 75 milyan oo gini.
Kooxda Bayern Munich ayaa sidoo kale ciyaartoyda ay suuqa sida weyn uga raadinayso waxaa ka mid ah Leroy Sane oo ka tirsan Naadiga Manchester City.
RASMI: Tababarihii hore ee Heegan Cusmaan Aayarta oo loo magacaabay Macallinka cusub ee Kooxda…
Hal arrin oo Macallinka Kooxda Man United ee Ole Gunnar Solskjaer loo ceyrin karo suuqa xagaaga